Iziqukathi Zokudla Kwensimbi Ezingunxande Ngokwezifiso Zokupakisha Kotshwala
Amathini angenamthungo mahle njengamathini wokwenza izimonyo kanye ne-lip balm, amakhandlela, izimpushana kanye nezinye izinto ezahlukahlukene ezomile futhi ezinomswakama. Amathini wethu e-screw-top kanye ne-plug-ring ahlala evaliwe ephaketheni lakho.
Ukupakisha komkhiqizo wamalambu wezibani zamakhandlela kuyatholakala ngaphansi “kwezinyawo” ukuvikela amathebulethi (inketho eyenziwe ngokwezifiso). Amathini amancane angahehi enza amakhandlela amahle wokuhamba. Futhi zifaka izindawo ezilahliwe zamalebula avamile osayizi. Ukupakisha kwamathini kutholakala kabusha unomphela ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi ephezulu. Okunye ukufakwa kungasho umjikelezo wokuphila omude. Thola okuningi maqondana ngqo nokuthi sikuthatha kanjani ukusimama.